Noqo Nooca ugu Fiican wiishka Bowl Bowl wiishka nooca Z Nooca Gaadiidleyda Bowl wiishka baaldi wareejinta weelka wiishka, gudbiyaha tusmada, wiishka baaldi birta ah aan daahin/cusub isku darka iyo mashiinka baakadaha oo si gaar ah loo habeeyey soo saaraha iyo Warshada |Xingyong
Nooca weelka wiishka Bowl wiishka Z Nooca Gaadiidleyda Bowl wiishka baaldi wareejinta weelka wiishka, gudbiyaha tusmada, wiishka baaldi birta aan daawaha lahayn/cusub isku darka iyo mashiinka baakadaha si gaar ah loo habeeyey
Wiishka nooca maddiibaddu waxa uu adeegsadaa silsiladda si uu u hagaajiyo baaqugga silsiladda, si walxaha kala go'a ama miisaanka loo rido hal weel, taas oo aan fududayn in la isku daro.Walxaha waa la kululayn karaa ama waa la qaboojin karaa inta lagu jiro gaadiidka baakadaha.
Makiinadaha nooca labajibbaaran ee birta aan lahayn
Wiish nooca baaquli caag ah
Fuulista nooca baaquli
wiishka nooca baaldiga birta ah
wiishka nooca baaquli birta aan fiicnayn
1. Maddiibaddu waxay ka samaysan tahay polypropylene ABS, ama 304 SS.Ma fududa in la habeeyo, adkaysi u leh heerkulka aadka u sarreeya iyo heerkulka aadka u hooseeya, u adkaysta aashitada iyo daxalka alkali, waara, iwm.
2. Wiishka baaldiga silsiladda ah waxa uu si fiican u xaqiijin karaa gudbinta joogtada ah ama kala go'a waxana lala jaanqaadi karaa qalabka kale ee quudinta.
3 .Mugga gaarsiinta waxaa lagu hagaajin karaa wakhti kasta iyadoo loo eegayo shuruudaha.
4. Wiishka baaldi silsiladda ah way fududahay in la kala diro oo la isku keeno, fududahay in la shaqeeyo, dayactiro oo la dayactiro, fududahay in la kala diro oo la isku keeno, fududahay in la shaqeeyo, dayactiro oo la dayactiro.Si degdeg ah ayaa loo kala diri karaa si meesha looga saaro hadhaaga, way fududahay in la nadiifiyo, waxayna hubisaa badbaadada cuntada iyo nadaafadda warshadaha cuntada.
5. meel yar oo loo baahan yahay oo si fudud loo dhaqaajin karo.
1. Qalabka jirka: 304 birta, birta kaarboon
2018-03-21 121 2 .Hoopper Ikhtiyaar ah&Alala Xiriirinta:SS 304, ABS ama PP
3. Aqbal habaysan si waafaqsan sawirada macaamiisha.
wiishka nooca weelka:
Wiish maddiibad laba jibaaran oo aan bir lahayn
1. Hopper wuxuu ka samaysan yahay birta aan fiicnayn, kaas oo leh sifooyinka muuqaalka quruxda badan, ma fududa in la hagaajiyo, iyo heerkulka sare iyo iska caabinta heerkulka hooseeya.
2. Wiishka maddiibaddu way fududahay in la isku xidho oo la kala furfuro, hopper-kana si fudud ayaa loo nadiifiyaa.
Wiishka caagga ah ee nooca caaga ah waxaa inta badan loo isticmaalaa gudbinta burooyin yaryar, granular iyo walxo kale oo adag, sida hilibka doofaarka, hilibka lo'da, digaaga, iwm. Cuntooyinka cusub sida buskudka iyo jajabyada baradhada.
Walaxda si toosan ayaa looga soo qaadaa meel hoose ilaa sare, waxaana inta badan loo adeegsadaa qorshayaasha kor u qaadista sare ee xaddidan booska goobta.
Wiishka nooca maddiibaddu waxa uu adeegsadaa silsiladda si uu u hagaajiyo baaqugga silsiladda, si walxaha kala go'a ama miisaanka loo rido hal weel, taas oo aan fududayn in la isku daro.Walxaha waa la kululayn karaa ama waa la qaboojin karaa inta lagu jiro gaadiidka baakadaha.Mashiinka baakadaha ama baakadaha gacanta waxa loo isticmaali karaa, badiyaa cuntada la qaboojiyey ama walxo leh heerkul sare sida hilib barafaysan, bur bur la qaboojiyey, miraha, qalabyada, dalagga, daawooyinka. alaabta kiimikada miraha, cuntooyinka la qaboojiyey, badeecooyin granular ama badan, si toos ah xagga hoose ilaa meesha aad u baahan tahay.
Wiishka nooca baaldiga birta ah ee aan fiicnayn
Wiishka baaldiga birta ah ee birta ah waxa uu ku qaadaa alaabta qolof xidhan iyada oo la sii marinayo hopper ku xidhan silsiladda.Waxa la isku dari karaa si siman, toosan iyo toosan.Waxaa lagu quudin karaa hal dhibic waxaana lagu sii dayn karaa meelo badan iyada oo loo marayo qalabka dejinta.Si buuxda loo xidhay, ma jirto wax dareere ah, ma jirto wasakh.Waxay ku habboon tahay gudbinta dhammaan noocyada maraq iyo alaabta khudradda iyo alaabta granular, iyo gudbinta walxaha viscous ayaa ugu fiican.Faa'iidada ugu weyn ee qalabkani waa in ka kooban yahay mid dabacsan, heerka waxyeellada maaddadu waa mid hooseeya, iyo wax soo saarka alaabta cilladaysan waa laga hortagi karaa.
1. Makiinadu waxay ka samaysan tahay heerka cuntada polypropylene ABS maaddo la shubay ama 304# walax heerkeedu wanaagsan yahay oo la isku qurxiyey oo la alxanayo
2. Kor-u-qaadista baaldiga silsiladda waxay ku habboon tahay gudbinta joogtada ah ama kala-guurka ah iyo sidoo kale qalabka kale ee quudinta.
3. Mugga wareejinta waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahida wakhti kasta.
4. Qalabka baaldi silsiladda ah waa sahlan tahay in la kala diro oo la isku keeno, waana sahlan tahay in la shaqeeyo, la ilaaliyo oo la ilaaliyo. Dhammaan shaqada waxaa la samayn karaa iyada oo aan la helin shaqaale nidaamsan.Makiinada birta ah si degdeg ah ayaa loo kala diri karaa oo loo nadiifin karaa si loo hubiyo badbaadada cuntada iyo nadaafadda warshadaha cuntada.
5. Mashiinka oo dhan wuxuu hayaa meel yar waana sahlan tahay in la guuro.
Hore: Mashiinka rogista suunka wareejinta suunka wareejinta suunka wareejinta Gaarka ah u rogaya 180 darajo suunka wareejinta Gaarka ah ee PVC tayada sare leh warshadaha 90 darajo 180 digrii suunka wareejinta suunka suunka alaab-qeybiyeyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha-Warshada Shiinaha ee Mashiinka Hagaajinta Cunnada Alaabta Cuntada Darajada Rogeysa suunka wareejinta / Qalooca nidaamka looga baahan yahay gaadiidka rogan oo kala duwan
Xiga: wiishka baaldiga nooca Z, baakadaha cuntada machien baaldiga wiishka ”hopper caag ah, birta birta ah, quudinta cuntada, baakadaha si toos ah qalabkalevator Conveyor/Tipper kor u qaadida/ka daji alaabta si toos ah meel hoose ilaa meesha aad u baahan tahay
(Qiyaasaha shakhsiga ah ee 2.0L muunad caadiga ah waa inuu guulaysan doonaa)
Wiishka nooca maddiibad laba jibaaran oo aan bir lahayn
# 304 Bir la aan aheen rinji bir ah
1800mm (2.0L heerka)
1350mm (2.0L heerka)
Maaddada qaybaha cuntada ee xidhiidhka
304#ss,PP ama ABS
L2250mm*W1250mm*H*1580mm (2.0 Heerka)
wiish nooca baaquli fuula
# 304Bir aan bir lahayn rinji
wiishka nooca aan birta lahayn
Wiishka Bowl Nooca wiishka Bowl Elevator Z Nooca Gaadiidleyda Bowl
wiish baaldi bir aan lahayn
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Alaabta sifaysan, Khariidadda goobta, Gaadhida Skirt Skirt, Gaadhida suunka, Suunka Gudiyaha Korontada, Gaadhida birta aan lahayn birta ah, Baakadaha suunka wareejinta, Qaadista suunka tubbada, Dhammaan Alaabta